Zim Man who Fraudulently Obtained IDs and Run an NGO that Only Support Zimbabweans in SA Exposed. - Opera News
There's been so much attempt lately by South African citizens to uncover some zimbabwean nationals who are living in South Africa Illegally yet they are working and running their different businesses here.
The effort has led to the exposing of a zimbabwean man known as Mluleki Ncube who allegedly obtained his South African papers fraudulently and he uses the documents to claim South African citizenship.
Report said he is the owner of one Institute which is a company that benefit from government tenders but he only employ zimbabweans to work for him.
He was also alleged to own an NGO that caters and support only people from zimbabwe.
According to the statement as reported by Lerato Pillay on Twitter:
"Mluleki Ncube is a Zimbabwean who fraudulently obtained a SA ID & pretending to be a South African. He owns Quest Research Services(QRS) which is benefiting from government tenders and employs Zimbabweans. He runs Dr Mluleki foundation which donates to Zimbabwean communities only"
Mluleki Ncube Quest Research Services( South African Zim Zimbabwean